मेरुदण्डको चोट : Apangata Sarokar अपाङ्गता सरोकार:Create media space for disABILITY
दुर्घटना वा अन्य कारणले मेरुदण्डमा चोट लागेमा मेरुदण्डको बीचबाट जाने सुषुम्नामा चोट लागेपछि गतिशीलता वा अनुभूति नै अवरुद्ध हुन पुग्छ । विशेष गरी मोटर वा मोटरसाइकल दुर्घटना, घर वा रुखबाट खसेर अथवा मेरुदण्डमा हुने क्षयरोग, पोलियो स्पीना बिफिदाजस्ता रोगका कारण मेरुदण्डमा चोट पुग्छ । मेरुदण्डमा चोट पुग्नासाथ यसले आफूले गर्नु पर्ने आधारभूत काम गर्न सक्दैन, अझ चोट सुषुम्नामै पुगेपछि चोट लागेको स्थानदेखि मुनिका सबै अंगमा सूचना प्रवाह हुन अवरुद्ध हुन्छ ।
सुषुम्नाको चोट ढाडको पीडा वा अन्य रोगभन्दा फरक प्रकृतिको समस्या हो । कतिपय अवस्थामा मेरुदण्डमा चोट पुगे पनि त्यसले सुषुम्नामा आघात नपुगेको भए ठूलो समस्या पर्दैन, तर मेरुदण्डको कुनै पनि भागमा चोट लागि त्यसले सुषुम्नामा चोट पुग्न गएमा त्यसको असर गम्भीर हुनजान्छ ।
सुषुम्नाको चोट मूलत दुई किसिमको हुन्छ । अर्द्ध आघात र पूर्ण आघात । अर्द्ध आघात लागेका बिरामीहरुको हात खुट्टा चल्ने वा अनुभूति हुने हुन सक्छ । तर पूर्ण आघात लागेमा भने आघात परेको भागभन्दा मुनि केही पनि सूचना मष्तिष्कसम्म पुग्दैन । अंग्रेजीमा यो अवस्थालाई क्वाटर प्लेजिया र प्याराप्लेजिया भनिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरुको मेरुदण्डका कुनै पनि अंग (गर्दनसमेत) भाँचिए पनि सुषुम्नामा चोट पुगेको छैन भने उनीहरुले पक्षघातको सामना गर्नु पर्दैन । केही समयको बेड रेस्टपछि यस्ता व्यक्ति फेरि सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छन ।
वास्तवमा सुषुम्ना हड्डीहरुको औंठीभित्र सुरक्षित अत्यन्तै संवेदनशील नशाहरुको कोमल भाग हो । अंग्रेजीमा भर्टेब्रा भनिने हड्डीभित्र यो बगेको हुन्छ । मेरुदण्डको मूल हड्डीमा बढी चोट लागेको व्यक्तिले त्यतिनै बढी समस्या झेल्नु पर्छ । भर्टेब्रालाई त्यसको अवस्थितिअनुसार नामांकन गरिएको छ ।
७ सर्विकल भर्टेब्रा
१२ थोरासिक भर्टेब्रा
५ लम्बर भर्टेब्रा
५ फ्यूज्ड सर्कल भर्टेब्रा
गर्धनमा भएका आठ हड्डी जसलाई सर्वाइकल भर्टेब्रा भनिन्छ, यसमा चोट लागेमा हातदेखिकै अंगले काम गर्न छाड्छ । यसैलाई क्वाटरप्लेजिया भनिन्छ ।
डाक्टरहरुले सुषुम्नाको चोटको स्तरलाई एसिया ए, एसिया बी, एसिया सी र एसिया डी गरी चार भागमा बाँडेर विश्लेषण गर्ने गर्छन ।
चारै हात खुट्टाको पक्षघात (क्वाटर प्लेजिया):
सुषुम्नाको मूल बाटो अर्थात मतिष्कबाट निस्केर आएको घाँटीको हाड भाँचिएर त्यसले सुषुम्नामा आघात परेमा हात खुट्टासमेत चल्दैन । दिसा पिसाबबारे कुनै सूचना शरीरले थाह पाउँदैन ।
कम्मरमुनिको पक्षघात (प्याराप्लेजिया):
छातीदेखि पुछ्रे हाड -चाके हाड)सम्म कुनै पनि भागको मेरुदण्डमा चोट लागेर सुषुम्नामा चोट पुगेमा त्यसभन्दामुनिको सम्पूरण अंगमा पक्षघातको अवस्था हुनजान्छ । दिसा पिसाबमा नियन्त्रण हुँदैन ।
मेरुदण्डको प्रमुख तीन काम हुन्छन
* सुषुम्ना, तथा शरीरका आन्तरिक अवयवको सुरक्षा गर्नु
* शरीरलाई सिधा बनाइरहनका लागि ढाँचागत सहायता र संतुलन उपलब्ध गराउनु
* गतिशीलतामा लचीलोपन बनाइरहनु
मेरुदण्डको हड्डीका क्षेत्र
सामान्यतया मेरुदण्डका हड्डीहरुलाई चार मुख्य क्षेत्रमा विभाजित गर्ने गरिन्छ: सर्वाइकल (गर्दन), थोरासिक (छाती), लम्बर (ढाडको तल्लो भाग) र सेक्रल (पुछ्रे/चाके हाड)
मेरुदण्डक हड्डीको गर्दनको वरपरको भाग सर्वाइकल स्पाइन भनिन्छ । यो क्षेत्रमा सात टुक्रा हुन्छन, यसलाई C1 देखि C7 भनिन्छ । यी हड्डीका टुक्राले मस्तिष्कलाई सुषुम्नासँग जोडने भाग र सुषुम्नाको रक्षा गर्छन । टाउकोलाई सहारा दिन्छन र टाउको यताउता चलाउन सहयोग गर्छन ।
गर्दनको अन्तिम भागको ठीकमुनिबाट थोरासिक स्पाइनको १२ वटा हड्डीको सृङ्खला हुन्छ । यसलाई माथिबाट तलसम्म T1 बाट T12 भनिन्छ । T1 सबैभन्दा सानो र T12 सबैभन्दा ठूलो थोरासिक हड्डी हो । थोरासिक सृङ्खलाका सर्वाइकल हड्डिहरुभन्दा ठूला हुन्छन । यो भाग छातीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । करङसँग पनि जोडिएकाले यो भाग केही बलियो हुन्छ ।
लम्बर स्पाइनमा ५ वटा हड्डीका टुक्रा हुन्छन जसलाई L1 देखि L5 ले चिनिन्छ । यसका प्रत्येक हाडका आकार-प्रकार यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि शरीरको अधिकांश भार उठाउन सकोस । लम्बरका हड्डीका प्रत्येक संरचना तत्त्व, सर्वाइकल और थोरासिक क्षेत्रमा रहेका त्यसका बराबर अन्य मेरुदण्डका हड्डीका तुलनामा केही मोटो ठूलो र फराकिलो हुन्छ । । सेक्रल स्पाइन सक्रम कम्मरको ठीक मुनि हुन्छ। पाँच हड्डि (S1 बाट S5) त्रिकोणीय आकारमा आपसमा जोडिएका हुन्छन ।
नेपालमा स्पाइनल इन्जुरी अर्थात मेरुदण्डको चोटबाट अहिलेसम्म १५००० भन्दा बढी नेपालीहरु प्रभावित भइसकेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा अहिलेसम्म मेरुदण्डको चोट र त्यसको प्रभावबारे सही सूचना प्रवाह हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष ५०० नेपालीलाई मेरुदण्डको समस्या पर्ने गरेको छ । अधिकाङ्स नेपालीहरु रुखबाट खसेर वा घरको माथिल्लो तलाबाट खसेर मेरुदण्डको चोटबाट ग्रसित हुने गरेका छन । नेपालमा मेरुदण्ड /सुषुम्नाबारे स्पेशलाइजेशन गरेका डाक्टरहरुको अभाव छ । हाडजोर्नी वा स्नायु सम्बन्धी डाक्टरले नै यस्ता बिरामी पनि हेर्ने गरेका छन । वास्तवमा यो दुबैसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या हो ।
दुर्घटनामा परेको ८ घण्टाभित्रमा Methylprednisolone (Medrol) को इन्जेक्सन लगाउन सकिएमा सुषुम्नाले पुन काम गर्नसक्ने स‌भावना रहन्छ । तर नेपालमा यसबारे त्यति जानकारी नहुँदा यो इन्जेक्सन कमैले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन । दुर्घटनास्थलबाट बिरामीको टाउकोदेखि कम्मरको भाग नचल्ने गरी विशेष रुपमा सुताएर अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
मेरुदण्डको चोट लागिसकेपछि स्वास्थ्यको ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्ता विरामीलाई सही ढ‌गले पुनर्स्थापना गर्नु पर्छ । सबै उपकरण र विशेषज्ञसहितको पुनर्स्थापना केन्द्र नभए पनि बनेपा र पोखरामा पुनर्स्थापना केन्द्रहरु छन । यी पुनर्स्थापना केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनबारे आधारभूत कुरा र व्हिलचेयर चलाउन सिकाइन्छ । सुषुम्नामा अर्ध चोट लागेका व्यक्तिहरु पुनर्स्थापना प्रकृयामै फेरि हिड्न पनि सक्छन । सामान्यत सुषुम्नामा अर्ध चोट लागेका व्यक्तिहरु १८ महिनासम्म सामान्य अवस्थामा फर्कने सम्भावना रहन्छ ।
ओच्छयाने घाउ (बेड/प्रेसर सोर)
एकै स्थानमा लामो समयसम्म बसिरहेका कारण छालामा दबाब परेर उत्पन्न हुने घाउ नै ओच्छ्याने वा दबाबी घाउ हो । सुरुमा छालाको कुनै भाग दबिएर रातो बन्ने र पछि विस्तारै छालामा घाउ बनेर मासुको भाग हुँदै हड्डीसम्म पुग्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । नेपालमा अधिकांस सुषुम्नाका चोटका विरामीहरु यस्तै समस्याका कारण मृत्युको मुखसम्म पुगेको पाइन्छ ।
लामो समयसम्म एउटै अवस्थामा बसिरहेमा वा एकै अवस्थामा सुतिरहेमा त्यसको दबाबले रगत सबै कोषिकामा पुग्न पाउँदैन र दबाब परेको सम्बन्धित भागको कोषिका मर्न थाल्छ । सामान्य अवस्थामा स्नायुले यो अवस्थाको सूचना मतिष्कसम्म पठाउँछ र आम मानिसले आफ्नो बसाई वा सुताईको अवस्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्छन, तर सुषुम्नामा पुगेको क्षतिले स्नायु प्रणालीले सही ढंगले काम गर्न पाउँदैन र स्नायुले पठाएको सूचना मतिष्कसम्म पुग्दैन ।
त्यही भएकाले सुषुम्नाको चोट लागेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्ने तरिका सिक्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि व्हीलचेयरमा बस्नेहरुले हातको बल प्रयोग गरेर हरेक ३० मिनेटमा ३० सेकेन्ड उठ्न जरुरी छ । यदि छालामा देखिएको रातोपन ३० मिनेटमा पुनः पूर्वावस्थामा नआएमा ओच्छाने/दबाब घाउ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सुषुम्नामा चोट लागेका व्यक्तिहरुलाई विशे ष गरी ओच्छाने घाउबाट बचाउनु पर्छ । अन्य सामान्य मानिसहरुभन्दा सुषुम्नाको चोट लागेका व्यक्ति फरक हुने भएकाले हरेक ३० मिनेटमा ३० सेकेन्डका दरले उभ्याउने (हातको बल प्रयोग गरेर आफै उभिने) सुत्दा २/२ घण्टामा कोल्टे, उत्तानो र कोल्टे फर्कने वा फर्काउने गरिरहनु पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा दबाब नपर्ने गरी बसाई/सुताईको अवस्था परिवर्तन गर्ने ।
घाउलाई सफा राख्ने । सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने । विस्तारै किटाणुरहीत बनाउन साबुन र मनतातोपानीले धुने र किटाणुरहीत झोल -डिटल, बेटाडिनजस्ता)ले सफा गरे अझ राम्रो
खानपिनमा ध्यान दिने, विशेष गरी पर्याप्त प्रोटिन, क्यालोरी।भिटामिन ए, सी, जिंक र आइरनप्राप्त हुने खानामा ध्यान दिने । स्वस्थ छालालाई यी तत्वहरु आवश्यक छन ।
आफूले प्रयोग गर्ने ओच्छ्यान, व्हीलचेय कुसन, ओच्छ्यान/कमोट स्थान्तरणमा विशेष ध्यान दिने
यदि घर्षणका कारण घाउ भएको हो भने घाउको ड्रेसिङमा विशेष ध्यान दिने
यति गरेर पनि घाउ कम नभएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहयोगमा ड्रेसिङ गराउने
शरीरको मुत्रप्रणालीमा प्रमुख अंगहरुले काम गर्छन । मृगौलाले पिसाब बनाउँछ । युरिनरी ब्लाडर -मुत्राशय)ले पिसाब जम्मा गर्छ र मुत्रमार्ग -युरेथ्रा)मारफत बाहिर पठाउँछ । मृगौलाले शरीरमा जम्मा भएको खराब पानी र रगतलाई छानेर पिसाब बनाउँछ । मृगौलाले नलीहरुमार्फत मुत्रासयमा पिसाब पठाउँछ । मुत्रासयलृ अस्थाई रुपमा पिसाब जम्म गरेर राख्छ । मुत्रासयको मांसपेशीहरु यसरी बनेका हुन्छन कि यसमा दुई कप पिसाब जम्मा भएर बस्छ । जब यी मांसपेशी खुम्चिन्छन, तब पिसाब मुत्रनली हुँदै बाहिर निस्कन्छ ।
तर सुषुम्नाको चोट लागेका व्यक्तिका लागि भने यो प्रकृयाले सामान्य ढंगले काम गर्न सक्दैन । सुषुम्नाको अन्तिम भागमा रहेको स्नायुले मुत्रप्रणालीले कसरी काम गर्ने हो भनेर नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तर सुषुम्नाको चोटले मृगौलाको पिसाब संकलन गर्ने र मुत्रासयमा जम्मा हुने कामलाई भने अवरुद्ध तुल्याउँदैन । सुषुम्नाको चोटपछि स्नायुले मुत्रथैली र त्यसभित्रको मांसपेशी तथा मष्तिष्क बीचको सूचना आदानप्रदानमा समस्या उत्पन्न गर्छ । जसका कारणले सहज ढंगले पिसाब आउने क्रम रोकिन्छ । सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा मुत्रथैली भरियो, अब पिसाब फेर भन्ने सूचनानै मतिष्कले लिने र मतिष्कले सम्बन्धित अंगलाई त्यसको आदेश प्रवाह गर्न सक्दैन ।
यसरी शरीरले स्वतः मुत्राशय खाली गर्न नसक्ने अवस्थामा ब्लाडर व्यवस्थापन प्रणालीसँग परिचित हुनु जरुरी छ । यो प्रणालीबाट मुत्रथैलीलाई नरम पाइप -क्याथेटर)को माध्यमबाट खाली गरिन्छ । यसबाट पिसाबसँग सम्बन्धित दुर्घटनाबाट बच्न र संक्रमण रोक्न मद्दत पुग्छ ।
मेरुदण्डमा परेको चोटको स्तरले डाक्टरहरुलाई पिसाबको व्यवस्थापन कसरी गराउने भन्ने भर पर्छ । किनकी हरेक व्यक्तिको चोटको स्तर फरक हुन्छ, त्यसैले डाक्टरहरुले मुत्रथैलीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनका लागि केही परिक्षण गर्नु पर्छ, तर बिडम्बनाको कुरा नेपालमा पिसाबसम्बन्धी विशेषज्ञ थोरै मात्र छन ।
सुषुम्नाको चोट लागेका व्यक्तिलाई दिसा पिसावको अनुभव हुन नसक्ने भएकाले सेल्फ क्याटेटर गरेर हरेक तीन चार घण्टामा पिसाब फेर्ने फेराउने गरिन्छ यसका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरुमा पनि सिकाइन्छ । विशेष गरी गर्दनको हाड भाँचिएका व्यक्तिको पिसाब रोकिएर रक्त प्रवाहमा समेत असर परी अनुहार रातो हुने टाउको दुख्ने समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल लगिहाल्नु पर्छ ।
सुशीला को मिली छात्रवृति, फिरोज को दिव्यांग पेंशन, तो बागेखां को आवासीय पट्टा - Patrika News
Special Disability Certificate: तमाम दिव्‍यांग सरकारी योजनाओं से हैं वंचित, जानें इसका कारण - दैनिक जागरण
ट्रेनिंग के दौरान पहुंची चोट से होने वाली विकलांगता पर भी देनी होगी विकलांग पेंशन - Patrika News
केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान? - NDTV India
दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन जारी होगा सर्टिफिकेट, बिना देरी मिलेंगी सरकारी सुविधाएं - TV9 Hindi
बजेट २०७८ ले अपाङ्गता सबालमा के के बोल्यो?
अपाङ्ग महिला संघ कञ्चनपुरद्वारा अपाङ्ग बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक वितरण